काठमाडौं– केही दिनअघि फेसबुकमार्फत बलात्कारविरुद्ध नयाँ अभियान थालियो। महिलाले कालो रंगको फोटो पोस्ट गरेर ‘साइलेन्ट प्रोटेस्ट’ सुरु गरे। यो अभियानमा पुरुषले पनि उत्तिकै साथ दिए।
यसका अभियन्ताले फेसबुकमा राखिएका कालो तस्बिरका दुई विशेष अर्थ रहेको बताएका छन् । पहिलो, महिलाबिना पुरुषको जीवन कालो तथा अँध्यारो हुन्छ। दोश्रो, बलात्कृत महिलाको जीवन निस्पट्ट कालो हुन्छ।
कानुन संशोधन गरेर बलात्कारीमाथि कडा कारबाहीको माग गर्नेहरू फेसबुकमा मात्र होइन, सडकमा पनि उत्रिन थालेका छन्।
कालो रंगको प्रदर्शनसहित यसै साता माइतीघरमा प्रदर्शन भयो। आँखामा कालो पट्टी, मुखमा कालै माक्स र कालो कपडामा ‘बलात्कारी होस् तँ’ भन्दै सुरु गरिएको प्रदर्शन एकै समयमा देशैभरि भयो ।
अत्यधिक रूपमा बढ्दै गएको यौन दुव्र्यवहार विरुद्धको यो अभियान चलाएको थियो, ‘अझै कति सहने’ नामक स्वतन्त्र समूहले ।
बलात्कारविरुद्ध समयसमयमा साना–ठूला आन्दोलन भइरहेका छन् । तैपनि बलात्कारका घटना दिनदिनै बढ्दै गएका छन् ।
नेपालमा पछिल्लो ६ वर्षयता हरेक वर्ष बलात्कारका घटनाको ग्राफ बढ्दो छ । गत असोजमा नेपाल प्रहरीले नेपालमा हरेक दिन ६ देखि ७ जना महिलाले बलात्कार तथा जबर्जस्ती करणीको सिकार हुने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्यो ।
यो तथ्यांक बलात्कारपछि प्रहरीमा उजुरी दिन आएका घटनापछिको हो । तथ्यांकअनुसार पछिल्लो वर्ष मात्रै देशभरका २ हजार ४ सय ४९ बलात्कारका घटना प्रहरीमा दर्ता भए । यसबाहेक गाउँघरमा ढाकछोप गरेर लुकाइएका यस प्रकृतिका घटना कति होलान् ? जसको यकिन जवाफ कसैसँग छैन । उजुरी दर्ता गर्न आएका पीडितले न्याय पाएको खासै उदाहरण छैन।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ हजार ५ सय ७० वटा बलात्कारका घटना दर्ता भएका थिए । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ हजार ४ सय ४९ बलात्कारका घटना दर्ता भइसकेका छन् । बलात्कारका घटना अपरिचितबाट भन्दा चिनेजानेकै वा आफन्तबाट बढी हुने गरेको पाइएकाले अनुसन्धान गर्न कठिन हुने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
पछिल्ला केही वर्षका घटनाक्रमले पीडित ११ देखि १७ वर्ष बीचका बालिका धेरै रहेको पाइएको छ।
देशभरिबाट प्रहरीमा १ हजार ४ सय ८० बलात्कारका उजुरी दर्ता हुँदा १ हजार १ सय ६६ बलात्कार ११ देखि १७ वर्ष उमेरका बालिकामाथि पाइयो ।
किन बढदै छ ?
बलात्कारका घटना कम हुनुको साटो किन बढ्दै छ ? राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारी भन्छिन्, ‘जो बलात्कार पीडित छ उसैलाई दोषारोपण गरेर बहस सुरु हुन्छ । उसको चरित्र, व्यक्तित्व र उठबस कोसँग थियो भन्नेजस्ता प्रश्नहरू उठ्न थाल्छन् । त्यस्तो कदापि हुनु हुँदैन । बलात्कार विशुद्ध अपराध हो ।’
नेपाली समाजमा महिलालाई घर तथा समाजको इज्जतको रूपमा हेरिन्छ । अझ भनौं महिलाको यौनिकतालाई इज्जतसँग तुलना गरिन्छ ।
‘जब कुनै महिला बलात्कृत हुन्छिन्, उनले न आफ्नो परिवारलाई भन्न सक्छिन्, न त अरू कसैलाई । जब उनले म बलात्कृत भएँ भन्छिन्, उनले आफ्नो परिवारको इज्जत फाल्छिन् भन्ने मान्यता छ,’ वरिष्ठ पत्रकार वविता बस्नेत भन्छिन्, ‘उनी समाजको आँखो बन्छिन् । यसकारण बलात्कृत महिला आफू बलात्कृत भएको विषय जिन्दगीभर आफूसँग राख्न विवश हुन्छन् ।’
समाज र देशको हरेक मुख्य निर्णायक भूमिकामा पुरुष हाबी हुनु अपराधका घटना वृद्धि हुनुको अर्को मुख्य कारण भएको अधिवक्ता नानी थापाको बुझाइ छ ।
‘प्रहरी प्रशासनमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी कार्यालयका प्रमुख पुरुष नै छन् । बलात्कारबाट महिला पीडित हुन्छन् । बलात्कृत महिलाको भावना र पीडा एक महिला कर्मचारीले जुन गहिराइसम्म बुझ्न सक्छ, त्यो कदापि पुरुष कर्मचारीले बुझ्न सक्दैन,’ अधिवक्ता थापा भन्छिन्, ‘बलात्कृत महिला प्रहरी प्रशासनमा पुग्दा अर्को पुरुषको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । पुरुष प्रहरीका कतिपय अनुसन्धानका प्रश्नहरू पीडितका लागि पीडादायी बनिदिन्छन् ।’
महिला बलात्कारपश्चात् प्रहरी कार्यालय पुगेर किटानी जाहेरी गर्न सहज महसुस गर्दैनन् । कतिपय अवस्थामा प्रहरीले पीडितको बयान विश्वास गर्दैनन् र उजुरी नै लिँदैनन् ।
राजनीतिक संरक्षण, सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग बलात्कारको घटना वृद्धिको अर्को कारण हो । नेता, उच्च ओहोदाका कर्मचारीका आफन्त, राजनीतिक कार्यकर्ता नै पीडकको संरक्षकका रूपमा उभिन्छन् । प्रहरी प्रशासनको अपारदर्शी कार्य सम्पादन दिन–प्रतिदिन बढ्दो छ । यसले अपराधीलाई अपराध गर्नमा थप प्रोत्साहन गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
नेपालमा भएको सञ्चारको विकास र यसको दुरुपयोग बलात्कार हुनुको अर्को कारण हो । हरेक व्यक्तिको मोबाइल इन्टरनेटमा पहुँच, पोर्न फिल्मको लत र त्यसको अनुसरणले महिला बलात्कृत हुन पुगेका थुप्रै दृष्टान्त छन् ।
अझ हाम्रो समाजमा बलात्कृत महिलाको ‘इज्जत लुटिएको’ भनिन्छ । तर, बलात्कार गर्ने पुरुषको भने ‘इज्जत गयो’ भनिँदैन । बलात्कृत महिलाले मुद्दा हाल्दादेखि र फैसला भइसकेपछि जीवनभर निर्धक्क हिँड्ने, डुल्ने र पहिला जसरी नै काम गर्ने वातावरणको प्रत्याभूति नहुँदासम्म बलात्कारका घटना अझै बढेर जाने सरोकारवालाहरूको मत छ ।